Cadaabta Jahannamada Weligeed ah, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Ciqaabta weligeed ah ee cadaabta - aargudashada ama aargudashada aadanaha?
Jahannamada waa mawduuc ay rumaystayaal badani ku farxaan, laakiin sidoo kale way ka walwalaan. Ku xirnaanshuhu waa mid ka mid ah caqiidooyinka ugu murugsan ee muranka badan ee caqiidada masiixiga. Dooddu xitaa kuma saabsana xaqiiqada ah in musuqmaasuqa iyo xumaanta la xukumo. Masiixiyiinta badankood waxay isku raacsan yihiin in Ilaah xukumayo shar. Muranka cadaabta ayaa dhamaantiis kusaabsan waxa ay umuuqan doonto, heerkullada halkaas ka jiri doona iyo ilaa iyo intee lagaa qaadi doonaa. Dooddu waxay ku saabsan tahay fahamka iyo la xiriirista caddaaladda rabbaaniga ah - waxayna dadku jecel yihiin inay u gudbiyaan qeexitaankooda waqtiga iyo booska illaa daa'in.
Laakiin Kitaabka Quduuska ahi ma dhahayo in Eebbe u baahan yahay aragtidiisa curyaanka ah si loogu tarjunto sawirkiisii ​​ugu fiicnaa weligiis. In kasta oo Kitaabka Quduuska ahi wax yar ka idhaahdo waxay u ekaan doonto cadaabta, inta badan waa xukun xukun qabow markay timaado xaqiiqooyin la taaban karo. Marka fikradaha laga wada hadlo, tusaale ahaan xoogga silica cadaabta - inta ay noqonayso kuleylka iyo muddada silica uu socon doono - dad badan, dhiig karka ayaa kacsan oo xiisadda ayaa buuxisa qolka.
Masiixiyiinta qaar ayaa aaminsan in waxa iimaanka saxda ahi yahay cadaabta. Qaarkood waa kuwa aan kala go 'lahayn marka ay timaaddo naxdinta ugu weyn ee suurta galka ah. Aragti kasta oo ka leexata tan waxaa loo diidayaa inuu yahay deeqsi, horusocod, cadow ku ah iimaanka oo u eg mid caqli gal ah, iyo, oo ka duwan iimaanka ay ku sii socoto dembiilayaasha loo dhiibo gacanta Ilaah xanaaqiisa, waxaa loo nisbeeyay inay yihiin dad doqon ah. Caqiidooyinka qaarkood waxay rumeysan yihiin in cadaabta ay tahay dhibaato la soo koobi karo, oo ah tijaabadii Masiixiyada saxda ah.
Waxaa jira Masiixiyiin rumeysan xukunka xukunka laakiin aan si dhab ah uga warqabin faahfaahinta. Anigu waxaan ka mid ahay Waxaan aaminsanahay xukunka rabbaaniga ah ee cadaabta u taagan fogaan waarta oo xagga Ilaah ka timid; Si kastaba ha noqotee, illaa iyo inta faahfaahinta la quseeyo, waxaan ahay wax uun Oo waxaan aaminsanahay in baahida loo qabo murug weligeed ah sida ficil la caddeeyo oo qancin loogu talagalay Ilaaha xanaaqsan ay si weyn uga soo horjeeddo Ilaaha jacaylka ah sida lagu muujiyey Kitaabka Quduuska ah.
Waxaan shaki ka qabaa sawirka cadaabta oo lagu qeexay dheellitirka caddaaladda - aaminaadda ah in Eebbe dulleeyo dambiilayaasha maxaa yeelay iyagu uma qalmin haddii kale. Oo waan diidanahay fikirka ah in cadhada Eebbe laga xanaajin karo dadku (ama ugu yaraan naftooda) ayaa si tartiib ah loogu dubay candhuuf, si muuqata. Cadaaladda aargudashadu kama mid tahay muuqaalka Ilaah sidaan anigu u aqaan. Waxaan rumeysanahay, si kastaba ha noqotee, in maragguu Kitaabka Quduuska ahi dhigayo in Ilaah xukumayo shar; Intaa waxaa sii dheer, waxaan aaminsanahay inuusan u horseedi doonin cadaab weligeed ah dadka isagoo aan ku soo rogin ciqaab jireed, maskaxeed iyo mid ruuxi ah weligiis.
Miyaan difaacnaa fikradeena gaarka ah ee cadaabta?
Aayadaha Kitaabka Qudduuska ah ee ku saabsan cadaabta shaki la'aan waxaa loo fasiri karaa siyaabo kala duwan - waana noqon doontaa. Fasiraadahaas is khilaafsan ayaa dib ugu noqonaya shaygii fiqi ahaaneed iyo kuwii ruuxiga ahaa ee sahaminlaha Baybalka - sida ku xusan ujeedada: Waxaan u arkaa sidaas oo waxaad u arkeysaa si ka duwan. Shandadaheena boorsada ayaa naga caawin karta inaan gaarno aasaaska cilmiga fiqika ah ama inagu qasbay oo naga kaxeyso runta fog.
Aragtida cadaabta ee tafsiirka Kitaabka Qudduuska ah, wadaaddada iyo macallimiinta Qorniinka ugu dambeyntii matalaan waa, waxay umuuqataa, iyagoon tanaasulin, midka ay shakhsi ahaantooda ka bilaabayaan oo ay gadaal ka raadinayaan inay qoraan buugga Baybalka.
Marka in kasta oo aan runtii dhexdhexaad ka ahayn marag furdaanka Baybalka, markay cadaabta timaado, waxaa lama huraan ah inaan maskaxda ku hayno in inta badan loo adeegsado in lagu xaqiijiyo waxa la aamisan yahay. Albert Einstein wuxuu ka digay: Waa inaan isku daynaa inaan aqoonsano waxa dhabta ah ee aysan aheyn waxaan rabno inaan aqoonsanno.
Masiixiyiin badan oo sheegta inay yihiin muxaafid waxay aaminsan yihiin in awoodda Kitaabka Quduuska ah ay khatar ku jirto xitaa halganka loogu jiro naarta iyo cadaabta. Fikradooda, kaliya cadaabta macno ahaan loo fahmay ee cadaabta weligeed ah waxay la mid tahay heerka kitaabiga ah. Muuqaalka cadaabta ee ay hanteen waa midka la baray. Waa muuqaalka cadaabta oo laga yaabo inaad u baahatid inaad ilaaliso heerka aragtidaada diineed ee adduunka. Qaarkood waxay ku qanacsanyihiin saxnaanta iyo lagama maarmaanka u ah muuqaalkooda diineed ee cadaabta oo aaney rabin inay aqbalaan wax caddeyn ah ama diidmo macquul ah oo su'aal ka keenaysa aragtidooda.
Kooxo badan oo iimaan leh, muuqaalka muuqaalka leh ee silica weligeed ah wuxuu ka dhigan yahay bawdada weyn, ee hanjabaadda u ah Waa aalad edbin ah oo ay ku hanjabayaan idahooda una hanuunin jihada ay heleen. In kasta oo cadaabta, ay u arkaan rumaystayaasha xag-jirnimada lihi, ayaa laga yaabaa inay tahay qalab edbin ah oo edbin leh si ay adhiga ula socdaan, way adag tahay in dadka loo soo dhowaado Ilaah. Si kastaba ha noqotee, kuwa ku soo biira kooxahan sababtoo ah ma doonayaan in laga tago, looma soo jiito xerada noocan ah ee tababbarka diinta si sax ah sababtoo ah Ilaah aan la jaan qaadi karin, iyo jacaylka wada-qabashada.
Dhanka kale, waxaa jira Masiixiyiin rumeysan in xukunka Ilaah ee sharku uu la mid yahay diyaarinta kooban ee microwave - dhaqso, wax ku ool ah oo aan xanuun lahayn. Waxay u arkaan tamarta iyo kuleylka ay sii daayaan nukliyeerka nukliyeerka ah ee gubida xanuun la’aanta kaas oo Eebbe shaki la'aan ku ciqaabi doono xumaanta. Masiixiyiintan, oo mararka qaar loogu yeero u doodeyaasha baabi'inta, waxay u muuqdaan Ilaah inuu yahay mid naxariis leh Dr. Kevorkian (Dhakhtar Mareykan ah oo caawiyay 130 bukaan ismiidaamin ah) oo ku duray cirbad dil ah dambiilayaasha lagu dilay cadaabta (taas oo keenta dhimasho aan xanuun lahayn).
Ma aaminsani cadaabta cadaabta weligeed ah, laakiin kuma biirinayo u doodayaasha baabi'inta. Labada aragtiyood midkoodna ma galaan caddeymaha kitaabiga ah oo dhan, sida aniga ila tahay, cadaalad buuxda uma sameeyso Aabaheena jannada ku jira, oo lagu garto jacaylka oo dhan.
Naarta, sida aan u arko, waxay la mid tahay masaafada weligeed ah ee xagga Ilaah ka timaadda, laakiin waxaan rumeysanahay in jirkeenna, xadkeenna ahaan xagga caqligalka iyo luqadda, aysan noo oggolaanayn inaan tilmaamno baaxadda xukunka Ilaah. Waxaan ku soo gabagabeyn karaa in xukunka Ilaah uu qaabayn doono fikirka aargudashada ama xanuunka iyo dhibaatada ku dhacday dadka kale inta ay noolyihiin; maxaa yeelay ma haysto caddayn Baybal ku filan oo aan ku taageerayo aragtida noocaas ah. Iskusoo wada duuboo, dabeecadda Eebbe wuxuu u jilicsan yahay muuqaalka jahannamada, kaas oo lagu garto silica weligiis ah.
Khasaare: Sidee ayay cadaabta u noqon doontaa?
Dareenka macno ahaan, jahannamada lagu garto silica weligeed ah macnaheedu waa meel silica weyn, halkaas oo kuleylka, dabka iyo qiiqu ay ku badan yihiin. Aragtidaani waxay soo qaadaneysaa in aragtidayada bini aadamka ee dabka iyo burburka ay ka mid yihiin kuwa loo dhigmi doono siligga weligiis ah.
Laakiin cadaabta runti ma tahay meel? Miyay horeba u jirtay ama ma loo cayri doonaa taariikh dambe? Dante Alighieri ayaa daabacay in cadaabta ay ahayd koronto gudaha ah, oo ah caarada ay ku wareejisay badhtamaha dhulka. In kasta oo jumladaha u dhigma ee Kitaabka Quduuska ahi ay tilmaamayaan dhowr meelood oo dhulka ah cadaabta, tixraaca waxaa sidoo kale loo tixraacaa kuwa aan ahayn dhulka.
Mid ka mid ah doodaha jannada iyo cadaabta oo adeecda shuruucda caqligu waa in jiritaanka dhabta ah ee qofku uu ku tiirsan yahay midka kale. Masiixiyiin badan ayaa xalliyay dhibaatadan macangagnimada ah iyagoo jannada ku barbar dhigaya xiriir dhow oo Ilaah la yeelaya, iyagoo u sheegaya masaafada weligeed ah ee Eebbe ka gala cadaabta. Laakiin kuwa runta sheega ee waraaqda u dooda sawirka cadaabta kuma qanacsana fikradaha ay ugu yeedhaan cudurdaar. Waxay ku adkaysanayaan in sharraxaadaha noocan oo kale ahi aysan ahayn wax ka badan oo laga waraabiyo fiqiiga Vishivashi. Laakiin sidee cadaabta u noqon kartaa mid la xaqiijiyay, juqraafi ahaan deegaan ahaan, goob go'an? (waayihii hore iyo haddeerba oo ay kujirto weligeed ama sida dhuxul, dhuxul ciqaab ah oo ay wali tahay in laga sii iftiimiyo), kanasoo ah xanuun jidhka ah ee silica weligiis ah ee cadaabta lagu ciqaabi doono nafsadda aan jirka ahayn?
Qaar ka mid ah u doodaya aaminaadda dhabta ahi waxay mala-awaalayaan in markay cadaabta yimaaddaan, Ilaah wuxuu ku dhejin doonaa dacwooyin khaas ah oo aan u qalmin jannada oo si buuxda loogu qalabeysan yahay dhakhaatiirta xanuunka. Fikirkaan - nimcada ballanqaada cafiska waxay runtii naftaas ku ridi doontaa jahannamada dhar iyaga u horseedi doona inay dareemaan xanuun aan weligeed dhammaanayn - waxaa soo saaray dad caqli gal ah oo umuuqda inay ka badan yihiin cibaadadooda daacadda ah. Qaar ka mid ah u doodayaashaas macnaha leh waxay rumeysan yihiin in cadhada Ilaah in la qaboojiyo; sidaa darteed nafaha loo bixiyo cadaabta waxaa lasiiyaa shareecada Ilaahay iyaga oo aan ahayn mid ka soo ifbaxaya ciqaabta shaydaanka ee foosha xun.
Jirdil weligeed ah - ku qanacid Eebbe mise annagaba?
Haddii sawir noocan oo kale ah oo cadaabta ah, oo loo qaabeeyey silsilado weligiis ah, ayaa horeyba u naxdin leh haddii loo barbar dhigo ilaaha jacaylka, markaa innaga oo ah bini’aadamka sidoo kale waxaan ka heli karnaa wax waxbaristaas ah. Marka laga eego aragtida bini aadamka ee muuqata, nalaguma qaadan fikirka ah in qof wax xun fali karo iyada oo aan lala xisaabtamin. Waxaan rabnaa inaan hubino in ciqaabta Eebbe ee run ah uusan u oggolaanaynin qof inuu ku sii socdo. Qaarkood waxay ku hadlaan macnaha guud ee ka xanaajinta xanaaqa Ilaah, laakiin dareenkan maskaxeed ee caddaaladda ayaa runtii ah hal-abuurnimo uu hoggaamiyo aadamuhu taas oo kaliya ka dhigaysa caddaaladda fahamka aadanaha ee caddaaladda. Si kastaba ha noqotee, waa inaannaan u wareejinno aragtideena ciyaar caddaalad ah ilaahay, adoo u maleenaya in Ilaah doonayo in loo qanciyo si la mid ah sida annagaba.
Ma xasuusataa markii aad yareyd inaad ka tagtay dariiqaaga si aad ugu ogeysiiso waalidiintaada ciqaabtooda ciqaabta ee walaalahaaga? Waxaad ka cago jiidaysay inaad daawato walaalahaaga oo wax la dhacaya, gaar ahaan haddii horey lagugu ciqaabay isla xadgudubkaas. Ujeedadu waxay ahayd inay la mid ahaato dareenkaaga isku dheellitirka caddaaladda. Laga yaabee inaad ogtahay sheekada mu'minka rumeysan ee hurdada ka kacda habeenkii maxaa yeelay wuxuu ku qancay in meel qof ka baxsan karo qalad aan ciqaab lahayn uusan seexan karin.
Ciqaabta weligeed ah ee jahannamada ayaa na dejin karta sababtoo ah waxay la mid yihiin rabitaanka aadanaha ee caddaaladda iyo ciyaar caddaalad ah. Laakiin Baybalku wuxuu ina barayaa in Eebbe ku dhaqmo nolosha dadka iyadoo la adeegsanayo nimcadiisa oo uusan aheyn qeexitaanka aadanaha ee ciyaar wanaaga. Qorniinku wuxuu kaloo si cad ugu caddaynayaa inaynaan bini aadamku marwalba aqoonsan weynaanta nimcada Ilaah ee cajiibka ah. Waxaan arki doonaa inaad hesho waxa aad u qalanto oo Eebbe wuxuu hubin doonaa inaad hesho waxa aad u qalanto inay tahay xariiq fiican.Waxaan haynaa fikradaheena caddaaladda, oo inta badan diiradda saara mabda'a Axdiga Hore, isha isha. , Samee iligga iligga, laakiin fikradaheena ayaa wali jira.
Si kastaba ha noqotee si daacad ah ayaan u raacnaa fiqi-fiqi ama fiqiga habaysan ee dib u dhigaya ka xanaajinta cadhada Ilaah, runtu waxay ku sii jirtaa inay tahay ilaahay keligiis, sida uu ku sameeyo cadaawayaasha. (isaga iyo innaga). Bawlos wuxuu ina xusuusinayaa: Gacaliyayaalow, ha aarsanina, laakiin meel u banneeya cadhada Ilaah; maxaa yeelay, waxaa qoran, Aarsasho anigaa leh, oo waan abaalmarin doonaa, ayaa Rabbigu leeyahay. (Rooma 12,19).
Inbadan oo timaha-korinta ah, jahwareer, iyo jahwareer, matalaad faahfaahsan oo cadaabta ah oo aan maqlay oo aan ka aqristay waxay ka yimaadeen ilo diimeed iyo goleyaal si cad u adeegsan kara isla luqaddaas xaalad ka duwan kan lagu cambaareeyay si aan habooneyn oo aan caqli gal ahayn, maadaama ay yaraynayso rabitaanka aadanaha ee daadinta dhiigga iyo Rabshaduhu erey bay ku hadlaan. Laakiin rabitaanka rabitaanka ah ee ciqaabta Ilaah waa mid aad u weyn in, sababta oo ah la'aanta aasaaska aasaaska ee kitaabiga ah, nidaam cadaalad ku dhisan oo aadamigu ku leeyahay awood ayaa ku guuleysta gacanta sare. Fikradaha diinta ee ku adkaysanaya in ku adkaysta in silica weligeed ah ee cadaabta ay faafinayaan Ilaah ay yihiin kuwa ku kala baahsan diinta masiixiga (eeg Yooxanaa 16,2).
Waa diin diimeed in lagu adkeysto in kuwa aan ku noolaan waxa la rumeysan yahay ee dhulka jooga ay tahay inay ka cafiyaan guuldarradooda weligood. Sida laga soo xigtay Masiixiyiin badan, cadaabta waxaa loo keydin doonaa kuwa aan la badbaadin hadda iyo mustaqbalka. Ma badbaadiyey? Kumaa dhab ahaan waa kuwa aan kuwa aan badbaadiaynin? Meelo badan oo iimaanka ka mid ah, kuwa ka baxsan xadadka caqiidadooda gaarka ah ee caqiidada waxaa lagu magacaabaa kuwa aan la badbaadin. Qaar ka mid ah kooxahan iyo qaar ka mid ah macallimiintooda ayaa qirtay taas (dhibaatadii weligeed ahayd ee cadhada rabbaaniga ah), qaar ka mid ah kuwa badbaaday ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ka baxaan ururkooda. Si kastaba ha noqotee, waxaa loo qaadan karaa in ficil ahaan diimaha dhammaan ay faafiyaan muuqaalka cadaabta oo lagu garto ciqaabta weligeed ah, waxay qaadanaysaa aragtida ah in badbaadada weligeed ah lagu gaadhi karo nabadgelyada haddii qofku ka gudbo xuduudahooda aqoontooda.
Waan diidanahay aragtida qallafsan, ee qalbiga qallafsan ee caabudda ilaah xanaaqa kaasoo dhalleeceeya dhammaan kuwa ka baxsan dibadda si adag oo qeexan xadadka aaminsanaanta. Khiyaanada diinta ee ku adkaysata xukunka weligiis ah ayaa dhab ahaan loo arki karaa uun si loo caddeeyo dareenka caddaaladda aadanaha. Markaa, annagoo u qaadaneyna in Ilaah inala mid yahay, waxaan u dhaqmi karnaa sidii wakiilo socdaal oo safar bixiya oo aan dib ugu laaban weligood sifo lagu garto jirdil - oo aan u xilsaarinno meelahooda sharciga ah ee cadaabta oo ku xadgudba dhaqankeena iyo cilmigayaga. ,
Nimcadu miyuu dabka saaraa dabka weligiis ah?
Mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan isla mar ahaantaana diidmada ku saleysan injiilka ee aad u xun ee dhammaan sawirrada uur-jiifka ee la-maleyn karo ee silica weligeed ah waxaa laga heli karaa farriinta ugu weyn ee Warka Wanaagsan. Caqiidada sharci dejintu waxay qeexaysaa tigidhada bilaashka ah ee cadaabta oo la siiyo dadka oo ku saleysan shaqada ay qabtaan. Arin aad u badan oo ku mashquulsan mawduuca cadaabta lama huraan wuxuu u horseedaa dadka inay iyagu laftooda isku kalsoonaadaan. Waxaan runtii isku dayi karnaa inaan ku noolaano nolosheena si aannaan cadaabta u tagin anagoo isku dayna inaan ku noolaano sida ku xusan liistada sharci darrada ah ee mamnuucista iyo mamnuucista. Kama gaabinno inaanu ogsoonaado in kuwa kale laga yaabo inaysan u halgamin sida aan u dadaalno - sidaas darteedna si aan u awoodno inaan si fiican u seexanno habeenkii, waxaan iskaa wax u qabso uga caawinnaa Ilaah inuu helo meel jahannamo lagu garto jirdil weligeed ah si loo xafido.
Shaqadiisa Furiinka weyn CS Lewis wuxuu nagu qaadanayaa safar bas ah oo ay ka mid yihiin riyooyin samada ka tegaya oo jannada ku jira isaga oo rajaynaya in xuquuq joogto ah lagu sii joogo.
Waxay la kulmaan dadka deggan jannada, oo Lewis ugu yeeray kuwa la soo furtay weligood. Ruux weyn ayaa la yaab ku noqotay inuu helo qof jannada jooga oo uu garanayo in lagu eedeeyay dil iyo in lagu dilay dhulka.
Jinku wuxuu weyddiistaa: Waxa aan jeclaan lahaa inaan ogaado waa inaad sameysaan oo ah sidii gacankudhiiglihii dilay halkan jannada halka ay tahay inaan wado kale ku baxo oo aan sannadahaas oo dhan ku qaato meel u eg midabka midabka badan.
Kuwa la soo furtay weligoodba waxay isku dayaan inay sharraxaan in labada nin uu dilay iyo isaga laftiisu ay arkeen inuu la heshiiyay Aabbihii jannada horteeda.
Laakiin maskaxdu si fudud uma aqbali karto sharaxidan. Waxay ka hor imaaneysaa dareenkiisa cadaaladda. Caddaalad darrada ah in la ogaado weligaaba lagu soo furtay jannada dhexdeeda iyadoo lagu xukumay inuu ku sii nagaado cadaabka waa wax laga adkaado.
Markaa wuxuu qayliyaa kuwa la soo furtay weligiis, oo wuxuu dalbadaa xuquuqdiisa: Waxaan doonayaa oo kaliya xuquuqdayda ... waxaan leeyahay xuquuq la mid ah taada, miyaanan ahayn?
Tani waa sax meesha Lewis doonayo inuu na hogaamiyo. Wuxuu badbaadiyey kii weligiis badbaadin lahaa: Maan helin wixii aan lahaa, haddii kalese halkan joogi maayo. Mana heli doontid waxaad xaq u leedahay midna. Waxaad helaysaa wax aad uga fiican (Furiinka weyn, CS Lewis, Harper Collins, San Francisco, p. 26, 28).
Markhaatiga Kitaabka Quduuska ah - ma waxaa loo fahmayaa macno ahaan ama qaab ahaan?
Kuwa u dooda sawirka cadaabta, siday u xumayn kari weyday una sii waari lahayd, waa inay ku tiirsanaataa tarjumaadda saxda ah ee dhammaan jumladaha kitaabiga ah ee ku saabsan cadaabta. Qarnigii 14-aad, Dante Alighieri, ee majaajillada Divine Comedy, waxay u maleysay cadaabta inay tahay meel argagax leh iyo cadaab aan lagaran karin. Dante cadaabta waxay ahayd meel silic murugo leh halkaasoo dadka xun ay damacsanaayeen inay ku gogol xaaraan xanuun aan dhamaad lahayn oo dhiig karkaraya iyadoo qayladoodii weligeed sii dhammaatay.
Qaar ka mid ah aabayaasha kaniisadihii hore waxay rumeysnaayeen in kuwa janada laga soo furtay ay markhaanti ka noqon karaan ciqaabta kuwa la xukumay. Iyadoo la raacayo qaab isku mid ah, qorayaasha casriga ah iyo macallimiinta maanta waxay fiirinayaan in Ilaaha Qaadirka ah uu ku sugan yahay cadaabta si uu uga sii yaraado ama uga yaraado shaqsiyan inuu ogaado in xukunkiisa Eebbe runtii la fulinayo. Qaar ka mid ah kuwa caqiidada masiixiga ayaa runtii baraya in kuwa jannada ku jira waligood aysan walwal ka qabin inay ogaadaan xubnaha reerka iyo kuwa kale ee lagu jecel yahay cadaabta, laakiin in farxadooda weligeed ah ay ka imaan doonaan ogaanshaha xaqnimada Ilaah ee ka sarreysa, Kordhintooda iyo welwelkooda dadka mar lagu jeclaaday dhulka, kuwaas oo hadda u baahan inay u adkaystaan ​​silica aan dhammaadka lahayn, waxay umuuqdeen inay yihiin wax isbarbar dhig aan macno lahayn.
Marka aamin Kitaabka Quduuska ah (lagu dhejiyay dareen qalloocan oo caddaalad ah) waxay ku noqotaa khatar, afkaarta caqliga leh si dhakhso leh ayey gacanta ugu sarreysa u helaan. Ma qiyaasi karo sida kuwa boqortooyada Ilaah ugu yimaadda nimcada Ilaah ay u daaqi karaan jirdilka kuwa kale - iska daa kuwa ay jecel yihiin! Taas beddelkeeda, waxaan rumeysanahay Ilaaha aan waligiis joojin jacaylkiisa. Waxaan kaloo aaminsanahay inay jiraan sharraxayaal badan oo sharraxayaal ah iyo tusaalooyin loo adeegsaday Kitaabka Quduuska ah oo fikradda Ilaah sidoo kale ay tahay inay dadku ku fahmaan ruuxiisa. Oo Eebbe kuma dhiirigelin isticmaalka maahmaahyada iyo ereyada gabayada ee rajada ah inaanu ku dhumino macnahooda anagoo qaadanayna ereybixin ahaan.
waxaa qoray Greg Albrecht